Tababare Pep Guardiola oo arrintan carro weyn kaga muujiyay xiddigaha kooxdiisa Man City – Gool FM
(Manchester) 10 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guul 1-3 ah kaga gaartay dhigeeda Manchester United kulankii lugta hore wareega afar dhamaadka koobka Carabao Cup ay ku wada ciyaareen garoonka Old Trafford, balse guushaas kuma filnaanin inuu ku qanco macalinka reer Spain ee Pep Guardiola.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Metro” ee dalka England macalinka reer Spain ee Pep Guardiola kuma uusan faraxsaneyn in ciyaartoydiisa aysan ka faa’ideysan xaalada xun oo ay ku jirtay Man Utd.
Sky Blues ayaa qeybta hore ee ciyaarta ku hoggaamineysay 0-3, balse qeybta labaad ee dheesha Manchester United ayaa la timid gool, waxaana 1-3 ka dhigay da’ayarka reer England ee Marcus Rashford.
Wargeyska ayaa tilmaamay in Guardiola uu si cad kaga carooday wax qabadkii kooxdiisa Manchester City ee qeybta labaad ciyaarta, wuxuuna shaaca ka qaaday in ciyaartoda ay aheyd inay ka faa’ideystaan fursadihii muhiimka ahaa ay heleen si ay guul weyn u gaaraan, isla markaana ay u soo afjaraan arrinta ku saabsan u soo bixitaanka kulanka finalka koobka Carabao Cup, kahor inta aan la gaarin ciyaarta lugta labaad, taasoo ka dhici doonto Etihad.
Dhinaca kale Guardiola ayaa ku amaanay qaar ka mid ah ciyaartoydiisa wax qabadkooda gaarka ah, balse wuxuu u sheegay ciyaartoyda kooxda inay aheyd in ciyaarta ay ku dhameystaan lix gool.
Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka bisha December ee Premier League oo lagu dhawaaqay